နေလင်းအောင်: ဇနီးတစ်ဦးရဲ့ မေတ္တာ
အဲဒီနေ့ည အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ညစာပြင်ဆင်နေတဲ့ ဇနီးဖြစ်သူထံသွားပြီး သူမလက်ကို ဆုပ်ကိုင်ရင်း ကျွန်တော် ပြောလိုက်ပါတယ်။ “ကိုယ် မင်းကို ပြောစရာရှိတယ်။” သူမကတော့ ထိုင်ချလိုက်ပြီး တိတ်တဆိတ်နဲ့ စားသောက်နေခဲ့ပါတယ်။ သူမမျက်လုံးမှာ နာကျင်မှုတွေကို နောက်တစ်ဖန် ကျွန်တော် သတိပြုမိလိုက်ပါတယ်။
ရုတ်တရက် ကျွန်တော် ဆွံ့အသလိုဖြစ်ရင်း ပါးစပ်မဟနိုင် ဖြစ်သွားရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူမ ကျွန်တော်ရဲ့ ခံစားချက် သိရမှ ဖြစ်ပါမယ်။ ကျွန်တော် ကွာရှင်းပြတ်စဲ နေချင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် ဒီအကြောင်းအရာကို တည်ငြိမ်စွာနဲ့ အစပြုလိုက်ပါတယ်။ သူမကတော့ ကျွန်တော့်စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ပုံမရဘဲ ဘာကြောင့် ကွာရှင်းချင်ရတာလဲ ဆိုတာကိုသာ ညင်သာစွာ မေးမြန်းလာပါတယ်။
ကျွန်တော် သူမမေးခွန်းကို ပြန်မဖြေခဲ့ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် သူမ ဒေါသထွက်လာတယ်။ သူမ တူတွေကိုလွှင့်ပစ်ရင်း ကျွန်တော်ကို အော်ပြောလိုက်ပါတယ်။ “ ရှင်ဟာ လူမဟုတ်ဘူးပဲ။” အဲဒီနေ့ညက ကျွန်တော်တို့ စကားမပြောဖြစ်ကြပါဘူး။ သူမ အိပ်ပျော်နေခဲ့ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရေးမှာ မည်သည့်အားနက်ချက်ရှိသည်ကို သူမ ရှာကြည့်ချင်တယ်လို့ ကျွန်တော် သိနားလည်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူမကျေနပ်လောက်မယ့် အဖြေမျိုးပေးဖို့ ကျွန်တော် အခက်ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော့်နှလုံးသားဟာ ဂျိန်းဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးထံ ရောက်နေခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် သူမကို မချစ်တော့ပါဘူး။ သူမကို သနားနေမိရုံသာ ရှိပါတော့တယ်။
အပြစ်ရှိတယ်လို့ ခံစားမိရင်း ကျွန်တော်ဟာ ကွဲရှင်းပြတ်စဲမှု သဘောတူစာချုပ်ကြမ်းကို ရေးနေမိပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ အိမ်ရယ်၊ ကားရယ်နဲ့ ကုမ္ပဏီရဲ့ ရှယ်ယာ (၃၀)%ကို သူမပေးဖို့ တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ သူမ စာချုပ်မူကြမ်းကို စိုက်ကြည့်ပြီးနောက် အပိုင်းပိုင်း စုတ်ဖြဲပစ်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ ဆယ်နှစ်လောက် ပေါင်းသင်းခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးဟာ ခုတော့ သူစိမ်းတစ်ဦးလို ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ အချိန်တွေ၊ အရင်းအမြစ်တွေနဲ့ အားအင်တွေကို ကျွန်တော်နဲ့အတူ ဖြုန်းတီးခဲ့တဲ့အတွက် စိတ်တော့မကောင်းမိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ပြောခဲ့တဲ့စကားကိုတော့ ပြန်မရုပ်သိမ်းနိုင်ပါဘူး။ အကြောင်းကတော့ ကျွန်တော်ဟာ ဂျိန်းကို နှစ်နှစ်ကာကာ ချစ်နေလို့ပါပဲ။ နောက်ဆုံးမှာတော့ တွေ့ကြုံရလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်း သူမ ကျွန်တော့်ရှေ့မှာ အော်ငိုနေခဲ့ပါတယ်။့သူမရဲ့ ငိုကြွေးမှုဟာ ကျွန်တော့်အတွက် စိတ်ထွက်ပေါက် ရစေခဲ့ပါတယ်။ ရက်သတ္တပတ်ပေါင်းများစွာ တအုံနွေးနွေးဖြစ်နေခဲ့တဲ့ ကွာရှင်းပြတ်စဲဖို့ စိတ်ကူးအိပ်မက်ဟာ ခုတော့ ပိုပြီးခိုင်မာ ပြတ်သားလာခဲ့ပါတယ်။
နောက်တစ်နေ့တွင် ကျွန်တော် ညည့်နက်မှ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ သူမ စာရေးစားပွဲမှာ တစ်ခုခုရေးနေကြောင်း တွေ့မြင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် ညစာမစားတော့ဘဲ အိပ်ရာဆီ တန်းသွားရင်း အိပ်ချလိုက်ရာ ချက်ချင်းအိပ်ပျော်သွားပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ အဲဒီနေ့က ဂျိန်းနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်ခဲ့ရတဲ့အတွက် ကျွန်တော် ပင်ပန်းနေခဲ့လိုပါပဲ။ ကျွန်တော် တစ်ရေးနိုးတဲ့အချိန်မှာ သူမ စာရေးစားပွဲမှာပဲ စာရေးနေပါသေးတယ်။ ကျွန်တော် ဂရုစိုက်မနေတော့ဘဲ အခြားတစ်ဖက်လှည့်ရင်း အိပ်ပျော်သွားပြန်တယ်။
နောက်တစ်နေ့နံနက်မှာ သူမက ကွာရှင်းပြတ်စဲမှု သတ်မှတ်ချက်တွေ တင်ပြလာပါတယ်။ ကျွန်တော့်ထံမှ ဘာမှမယူလိုဘဲ မကွာရှင်းမီ တစ်လအကြာ ဂရုစိုက်ပေးမှုကိုပဲ အလိုရှိပါတယ်တဲ့။ ဒီတစ်လအတွင်း ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးဟာ တတ်နိုင်သမျှ ပုံမှန်ဘဝအတိုင်း ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားရန် သူမက မေတ္တာရပ်ခံခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ အကြောင်းပြချက်ကတော့ ရိုးရိုးလေးပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သားဟာ တစ်လအတွင်း စာမေးပွဲဖြေရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွာရှင်းမှုကြောင့် သူ့ကို အနှောင့်အယှက် မဖြစ်စေချင်လို့ပါတဲ့။
ကျွန်တော် လက်ခံလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူမအတွက် တစ်ခုရှိပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လက်ထပ်တဲ့နေ့က သတို့သမီးအခန်းထဲ သူမကို ကျွန်တော်ပွေ့ချီခဲ့တာ ပြန်စဉ်းစားလိုက်ဖို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ တစ်လတာအတွင်း နံနက်တိုင်း အိပ်ခန်းကနေ အိမ်ရှေ့တံခါးထိ သူမကို ပွေ့ချီသွားဖို့လည်း မေတ္တာရပ်ခံပါသေးတယ်။ သူမ ရူးသွားပြီပဲလို့ ကျွန်တော် တွေးလိုက်မိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နောက်ဆုံးနေ့ရက်တွေကို သည်းခံဖို့ဆုံးဖြတ်ရင်း သူမရဲ့ ထူးဆန်းတဲ့တောင်းဆိုမှုကို လက်ခံခဲ့ပါတယ်။
ဂျိန်းကို ကျွန်တော့်ဇနီးရဲ့ ကွာရှင်းပြတ်စဲမှု သတ်မှတ်ချက်တွေ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့ တွေးရင်း ကျယ်လောင်စွာ အော်ရယ်နေခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဇနီးဟာ ဘယ်လိုလှည့်စားမှုတွေ အသုံးပြုလာပါစေ…သူမ အထင်သေးစွာ ပြောဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်း ကွာရှင်းပြတ်စဲမှုကို ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံ လာရမှာပါပဲ။
ကျွန်တော်ရဲ့ ကွာရှင်းပြတ်စဲဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုပြီးကတည်းက ကျွန်တော်နဲ့ ဇနီးဖြစ်သူတို့ဟာ ဖက်လဲတကင်း မရှိကြတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ပထမဆုံးနေ့ရက်မှာ သူမကို ပွေ့ချီလိုက်တော့ ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးလုံး အနေခက်နေကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သားက နောက်ကနေ လက်ခုပ်တီးရင်း “ဖေဖေက မေမေကို ပွေ့ချီနေပါတယ်”လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ သားရဲ့စကားကြောင့် ကျွန်တော် နာကျင်မှု ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ အိပ်ခန်းကနေ ဧည့်ခန်းအထိ၊ ပြီးတော့ တံခါးဝအထိ သူမကို ပွေ့ချီရင်း ဆယ်မီတာအကျော် ကျွန်တော် လျှောက်လှမ်းခဲ့ရပါတယ်။ သူမက မျက်လုံးပိတ်ရင်း ခပ်တိုးတိုး ပြောလိုက်ပါတယ်။ “သားကို ကျွန်မတို့ ကွာရှင်းပြတ်စဲမှာ မပြောပါနဲ့။” ကျွန်တော် စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားရင်းခေါင်းညိတ်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော် သူမကို တံခါးရှေ့မှာ ချပေးလိုက်ပါတယ်။ သူမက ကားဂိတ်လျှောက်သွားရင်း အလုပ်သွားဖို့ ကားစောင့်နေခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် တစ်ဦးတည်း ရုံးဌာနသို့ ကားမောင်းလာခဲ့ပါတယ်။
ဒုတိယမြောက်နေ့မှာတော့ ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးလုံး ပိုပြီး သက်သောင့်သက်သာနဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူမ ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ကို မှီလိုက်ပါတယ်။ သူမဘလောက်အင်္ကျီက ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ရေမွေးနံ့ကို ကျွန်တော်ရူရှိုက်မိလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ ဇနီးဖြစ်သူကို အချိန်အတော်ကြာ စေ့စေ့စပ်စပ် မကြည့်ခဲ့ရကြောင်း သတိပြုမိလိုက်ပါတယ်။ သူမ မနုပျိုတော့ကြောင်းကိုလည်း သတိထားမိလိုက်ပါတယ်။ သူမမျက်နှာမှာ အရေးအကြောင်းတွေ ပေါ်နေသလို ဆံပင်တွေလည်း ဖြူနေခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ထပ်မှုက သူမအပေါ် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေ သယ်ဆောင်လာခဲ့သလိုပါပဲ။ ကျွန်တော်ဟာ အချိန်အနည်းအကြာ သူမအတွက် ဘာများလုပ်ပေးခဲ့သလဲ စဉ်းစားလိုက်ပါတယ်။
စတုတ္ထမြောက်နေ့မှာ ကျွန်တော် သူမကိုပွေ့ချီလိုက်တော့ နွေးထွေးမှု တဖန်ပြန်ရောက်လာသလို ခံစားမိလိုက်ပါတယ်။ ဒီအမျိုးသမီးကြီးဟာ သူမဘဝရဲ့ ဆယ်နှစ်တာကာလကို ကျွန်တော့်အတွက် ပေးဆပ်ခဲ့ပါတယ်။ ငါးရက်မြောက်နေ့နဲ့ ခြောက်ရက်မြောက်နေ့မှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နွေးထွေးမှုဟာ နောက်ထပ်တဖန် တိုးပွားလာကြောင်း ကျွန်တော် သတိပြုမိခဲ့ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကိုတော့ ကျွန်တော် ဂျိန်းကို ပြောမပြခဲ့ပါဘူး။ တစ်လတာကုန်ဆုံးဖို့ နီးကပ်လာသလို ကျွန်တော့်အတွက် သူမကို သယ်ဆောင်ဖို့ ပိုပြီးလွယ်ကူလာပါတယ်။ နေ့တိုင်းသယ်ဆောင်ပေးခဲ့လို့ ကျွန်တော် ပိုပြီးသန်မာလာတာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တစ်နေ့နံနက်မှာတော့ သူမ ဝတ်ဖို့ဝတ်စုံ ရွေးနေခဲ့ပါတယ်။ တိတ်တဆိတ်နဲ့ အဝတ်အနည်းငယ် ရွေးချယ်ခဲ့ပေမယ့်လည်း သင့်တော်ရာဝတ်စုံ မတွေ့ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီနောက် သူမ သက်ပြင်းချရင်း ပြောလိုက်ပါတယ်။ “ကျွန်မအဝတ်တွေအားလုံး ပိုကြီးကုန်ကြပြီ။” သူမ အလွန်ပိန်လီလာကြောင်း ရုတ်တရုတ် ကျွန်တော် သတိပြုမိလိုက်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်ပဲ ကျွန်တော် သူမကို ပိုပြီး သက်သောင့်သက်သာနဲ့ ပွေ့ချီနိုင်ခဲ့ရတာပါ။
သူမနှလုံးသားထဲမှာ နာကြည်းခါးသီးမှုတွေ မြှုပ်နှံထားရကြောင်း တွေးမိတဲ့အခါ ကျွန်တော် ခံစားသွားရပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ မသိစိတ်ရဲ့စေခိုင်းမှုကြောင့် သူမဆီသွားရင်း သူမခေါင်းကို ပွတ်သပ်ပေးမိပါတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ သား ရောက်လာပြီ ပြောလိုက်ပါတယ်။ “ဖေဖေ…မေမေကို ပွေ့ချီဖို့ အချိန်ကျပြီလေဗျ။” သားအတွက်တော့ အဖေဖြစ်သူ သူ့အမေကို ပွေ့ချီတာ သူ့ဘဝရဲ့ မရှိမဖြစ် အစိတ်အပိုင်းလို ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်တော့်ဇနီးက သားကို အနားလာဖို့ အမှုအရာပြရင်း သားဖြစ်သူကို တင်းကျပ်စွာ ပွေ့ဖတ်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ နောက်ဆုံးအချိန်မှာ ကျွန်တော့်စိတ် ပြောင်းလဲသွားမှာကို စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့ရင်း မျက်နှာလွှဲလိုက်မိပါတယ်။ အဲဒီနောက် အိပ်ခန်းထဲမှ သူမကို ပွေ့ချီရင်း ဧည့်ခန်းကတဆင့် စင်္ကြံဘက်ဆီ ခေါ်ဆောင်သွားလိုက်ပါတယ်။ သူမလက်တွေကတော့ ကျွန်တော့်ပုခုံးကို နူးညံ့စွာနဲ့ သဘာဝကျကျ သိုင်းဖက်ထားခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လက်ထပ်ခဲ့တဲ့ နေ့ကအတိုင်း ကျွန်တော်ဟာ သူမကိုယ်ကို တင်းကျပ်စွာ သိုင်းဖက်ထားခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ပိုပြီးပိန်ပိန်လာတဲ့ သူမကို ကျွန်တော် စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပါတယ်။ (တစ်လပြည့်တဲ့) နောက်ဆုံးနေ့မှာတော့ ကျွန်တော် သူမကို ပွေ့ချီပြီးတဲ့အခါ ခြေတစ်လှမ်းပင် ခက်ခက်ခဲခဲ လျှောက်လှမ်းရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့သားဟာ ကျောင်းသွားနေပါပြီ။ ကျွန်တော် သူမကို တင်းကျပ်စွာပွေ့ရင်း ပြောလိုက်ပါတယ်။ “ကိုယ်တို့ဘဝမှာ နွေးထွေးမှု ကင်းမဲ့နေခဲ့တယ်ဆိုတာ သတိမထားမိပါဘူး။” ကျွန်တော် ရုံးခန်းဆီ ကားမောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ ကားတံခါးကို မပိတ်တော့ဘဲ လျှင်မြန်စွာ ဆင်းလိုက်မိတယ်။ တစ်ခုခုကြောင့် ကျွန်တော့်စိတ် ပြောင်းလဲသွားမှာကို စိုးရိမ်ရင်း လှေကားပေါ် တက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဂျိန်း အခန်းတံခါး ဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါ ကျွန်တော် သူမကို ပြောလိုက်ပါတယ်။ “ဂျိန်းရေ…စိတ်မကောင်းပါဘူးကွာ။ ကိုယ် မကွာရှင်းချင်တော့ဘူး။”
သူမ ကျွန်တော့်ကို တအံ့တသြကြည့်ရင်း ကျွန်တော့်နဖူးကို စမ်းလိုက်ပါတယ်။ “ရှင် နေကောင်းရဲ့လား”လို့ သူမက မေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော် သူမလက်ကို နဖူးပေါ်ကနေ ဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ “ဂျိန်းရေ…စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ငါ မကွာရှင်းတော့ဘူး” လို့ ကျွန်တော် ပြောလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေး စိတ်ကုန်ဖွယ်ဖြစ်လာတာ တစ်ဦးကို တစ်ဦး မချစ်တော့တာကြောင့် မဟုတ်ဘဲ ကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့ အသေးအဖွဲ့လေးတွေကို တန်ဖိုးမထားခဲ့တာကြောင့် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လက်ထပ်တဲ့နေ့က ဇနီးလောင်းကို ကျွန်တော့်အိမ် ခေါ်ဆောင်ခဲ့စဉ်က သေမင်းက ကျွန်တော်တို့ကို ခွဲခြားတဲ့အချိန်တိုင်အောင် သူမကိုပဲ လက်တွဲသွားခဲ့မယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့မိတာ သတိရလိုက်မိပါတယ်။ ဂျိန်းဟာ ရုတ်တရက် လန့်နိုးလာသလိုပါပဲ။ သူမ ကျွန်တော့်ပါးကို ဗြန်းခနဲရိုက်ပြီးနောက် တံခါးကိုဆောင့်ပိတ်ကာ မျက်ရည်စက်လက်နဲ့ ထွက်ခွာသွားပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း လှေကားအတိုင်းဆင်းလာရင်း ကားမောင်းထွက်ခဲ့ပါတယ်။ လမ်းမှာ ပန်းဆိုင်တစ်ဆိုင်တွေ့တော့ ကျွန်တော့်ဇနီးအတွက် ပန်းတစ်စီး မှာလိုက်ပါတယ်။ အရောင်းစာရေးမက ကတ်ပြားပေါ်တွင် မည်သို့ရေးချင်ကြောင်း မေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ပြုံးပြလိုက်ရင်း ကိုယ်တိုင်ရေးလိုက်ပါတယ်။ “သေမင်းက ကိုယ်တို့နှစ်ဦးကို ခွဲခွာတဲ့အချိန်တိုင်အောင် နံနက်တိုင်း မင်းကို ပွေ့ချီပေးသွားပါမယ်။”
အဲဒီနေ့ညနေ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ကျွန်တော်ဟာ လက်ထဲမှာ ပန်းတွေကိုကိုင်၊ အပြုံးပန်းဆင်ရင်း လှေကားပေါ် တက်ခဲ့ပါတယ်။ အိပ်ရာထဲမှာ ကျွန်တော့်ဇနီး သေဆုံးနေတာကိုပဲ တွေ့လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဇနီး ကင်ဆာရောဂါ ဝေဒနာ ခံစားနေရတာ လပေါင်းအတော် ကြာနေပြီဖြစ်ပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ ဂျိန်းနဲ့ကုန်လွန်နေခဲ့တဲ့အတွက် သူမကို ဂရုမစိုက် မိခဲ့ပါဘူး။ မကြာမီ သူမ သေဆုံးတော့မှာကို သိရှိရင်း အိမ်ထောင်ရေး ကွာရှင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး သားဖြစ်သူ ကျွန်တော့်အပေါ် မကောင်းမမြင်အောင် ကာကွယ်တားဆီးပေးချင်ခဲ့ကြောင်း ကျွန်တော် သိမြင်လာခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ကျွန်တော်ဟာ ချစ်ခင်ဖွယ် ခင်ပွန်းကောင်းတစ်ဦးလို့ပဲ ကျွန်တော့်သား မြင်သွားပါလိမ့်မယ်။
သင့်ဘဝရဲ့ အသေးအဖွဲ့လေးတွေဟာ အိမ်ထောင်ရေးမှာ တကယ်ကို အရေးပါပါတယ်။ အိမ်ကြီးရခိုင်၊ မော်တော်ကား၊ ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ ဘဏ်မှာရှိတဲ့ ငွေစသည်တို့ဟာ အိမ်ထောင်ရေးမှာ အရေးမပါပါဘူး။ ဒီအရာတွေဟာ ပျော်ရွှင်မှုအတွက် အထောက်အကူပေးတဲ့ ဝန်းကျင်တစ်ခု ဖန်တီးပေးနိုင်ပေမယ့်လည်း အတွင်းစိတ် ပျော်ရွှင်မှုကိုတော့ မဖန်တီးပေးနိုင်ပါဘူး။
ဒါကြောင့် သင်ဟာ သင့်အိမ်ထောင်ဖက်ကို အချိန်ပေးရင်း တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦး နွေးထွေးမှုတိုးစေမယ့် အသေးအဖွဲ့လေးတွေကို ပြုလုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ တကယ့်ကိုပျော်ရွှင်ရတဲ့ အိမ်ထောင်မှုသုခ ခံစားလိုက်စမ်းပါ။
မေတ္တာတရားဆိုတာ ရတနာအားလုံးမှာ အဖိုးအထိုက်တန်ဆုံးပါ။ မေတ္တာတရား မရှိဘူးဆိုရင် ဘယ်အရာမှ မရှိနိုင်ပါ။ မေတ္တာတရား ရှိတယ်ဆိုရင် အရာရာ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ချစ်သူတစ်ဦးရဲ့ အရိုးတွေဟာ မြေကြီးထဲမှာ အမှုန့်တွေအဖြစ် ဆွေးမြေ့သွားနိုင်ပေမယ့် မေတ္တာတရားကတော့ ဘယ်တော့မှ ပျောက်ပျက်မသွားနိုင်ပါဘူး။
I avoided her question. This made her angry. She threw away the chopsticks and shouted at me, "You are notaman!"That night, we didn’t talk to each other. She was weeping. I knew she wanted to find out what had happened to our marriage. But I could hardly give herasatisfactory answer; she had lost my heart to Jane. I didn’t love her anymore. I just pitied her!
Our son came in at the moment and said," Dad, it’s time to carry mom out." To him, seeing his father carrying his mother out had become an essential part of his life. My wife gestured to our son to come closer and hugged him tightly. I turned my face away because I was afraid I might change my mind at this last minute. I then held her in my arms, walking from the bedroom, through the sitting room, to the hallway. Her hand surrounded my neck softly and naturally. I held her body tightly; it was just like our wedding day.
But her much lighter weight made me sad. On the last day, when I held her in my arms I could hardly moveastep. Our son had gone to school. I held her tightly and said, "I hadn’t noticed that our life lacked intimacy." I drove to office…. jumped out of the car swiftly without locking the door. I was afraid any delay would make me change my mind…I walked upstairs. Jane opened the door and I said to her, "Sorry, Jane, I do not want the divorce anymore."
She looked at me, astonished, and then touched my forehead. "Do you haveafever?" she said. I moved her hand off my head. "Sorry, Jane," I said, "I won’t divorce." My marriage life was boring probably because she and I didn’t value the details of our lives, not because we didn’t love each other anymore. Now I realize that since I carried her into my home on our wedding day I am supposed to hold her until death does us apart. Jane seemed to suddenly wake up. She gave mealoud slap and then slammed the door and burst into tears. I walked downstairs and drove away. At the floral shop on the way, I orderedabouquet of flowers for my wife. The salesgirl asked me what to write on the card. I smiled and wrote, I’ll carry you out every morning until death does us apart.
Remember love is the richest of all treasures. Without it there is nothing; and with it there is everything. Love never perishes, even if the bones ofalover are ground fine like powder.
Posted by နေလင်းအောင် at 7:12 AM
jackpot political party is an affiliate of WMS Industries simply byatomentum, Barona Vale ranch isagorgeous stamping ground composite set in the picturesque Barona Vale Northward of Lakeside. [url=http://www.onlinecasinotaste.co.uk/]online casino[/url] http://www.onlinecasinotaste.co.uk/ An internet based casino which is certainly are the machines programmed to be identical soft to beat out. http://www.onlinecasinotaste.co.uk/
Enthusiastic gamblers can key or clicking the wrong push could drive you the biz. [url=http://www.bvnvpaydayloans.co.uk/]payday loans in the uk[/url] payday loans In plus to respins, you could Bump yourself rewarded to the Receive bonus. http://www.oiupaydayloans.co.uk/